What is MLM ~ Myanmar Anti Mlm Group
ကျွန်ုပ်သည် ဤ ဆောင်းပါးအား ရေးသင့်၏ မရေးသင့်၏ အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန်စဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမှ နောက်ဆုံးတွင် ရေးသင့်၏ ဟူသောဘက်မှ လွန်စွာ အလေးသာသွားသည့် အားလျော်စွာ တတ်စွမ်းသမျှ
ရေးသားပြုစုအပ်ပေသတည်း။ အကြောင်းအရာပါ အချက်အလက်များ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အယူအဆများ မှားယွင်းချွတ်ချော်ခဲ့သည်ရှိသော် ကျွန်ုပ်တွင် အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်အား သဘောရှိသလို ဝေဖန် ထောက်ပြ နိုင်ပါသည် စာရှု သူ ချစ် မိတ်ဆွေ ခင်ဗျား။
Multi-level marketing (MLM) ဆိုရာဝယ် marketing strategy တစ်ခုသာဖြစ်၏။အနှီ စနစ်သည်ကား sales force သက်သက်ရယ်သာမဟုတ်ဘဲ ရောင်းချသူ လူတမ်းစားများ network သဖွယ် pyramid သဖွယ် ကွန်ယရက်စုဖွဲ့၍ mass media မသုံးဘဲ (၀ါ)မကြော်ငြာဘဲ door-to-door(၀ါ) one-to-one စနစ်ဖြင့် ရောင်းချသော စနစ်ဟုလည်း မည်၏။
ကျွန်ုပ်၏ ယခုဆောင်းပါးမှာ ကား အနှီ စနစ်၏ ကောင်းမှု ဆိုးမှု အထွေထွေကို ဝေဖန် ပိုင်းခြား ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရန် သာဖြစ်ပေသည်။ အနှီစနစ်ဖြင့် စီးပွားလုပ်ကိုင်ကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ကုမ္ပဏီ ကြီး ငယ် များ
၄င်းတို့နှင့် ပတ်သတ်ဆက်နွယ်သူများအား ဝေဖန် တိုက်ခိုက်လိုခြင်း ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချလိုခြင်း အလျင်း မရှိဟု ဦးစွာပဏာမ မွက်ကြားပါရစေ။ထို့အတူ ဘယ် ကုမ္ပဏီကတော့ ဘယ်သို့ ဆိုတာမျိုး ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အစွဲ
(အမည်နာမ အပြည့်အစုံ)နှင့်လည်း ရေးသားမည် မဟုတ်ကြောင်း ထပ်လောင်း အသိပေးပါ၏။ စာရှုသူ ချစ်မိတ်ဆွေအား ဤဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တည်းဖြင့် တထိုင်တည်း ပြည့်စုံစေ့ငုစွာ ဖတ်ရှုစေချင်သော ကျွန်ုပ်စေတနာကြောင့် ဆောင်းပါးရှည်သွားလျင်လည်း သီးခံ ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်ဤနေရာမှ ချစ်ခင်သောစိတ်ထား
ကို အရင်းခံ၍ ပန်ကြားအပ်ပေသည်။
MLM စနစ်၏ သမိုင်းကို တူးဆွရလျင်ဖြင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ရှိ California Vitamin Company (Nutrilite)မှ အစပြုခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ distributors ဟု ဆိုအပ်သော လုပ်ခလစာ မခံစားသော ဖြန့်ချိရေးသမားများ ၏
ကွန်ယက် သဖွယ် စုစည်းမှု ဟု သတ်မှတ်ရမည် ဖြစ်၏။ commission ဟု သမုတ်အပ်သော ရောင်းရငွေအပေါ်မှ အကျိုးဆောင်ခ ရာခိုင်နှုန်းတခု ဖြင့် ရပ်တည်သည်ဟု အလွယ်လေးဆိုနိုင်ပေသည်။ MLM ၏ သရုပ် ကိုပေါ်လွင်အောင်
Model တခုဖြင့် ရှင်းအံ့။
၂.Typical MLM model (8 Balls model)
ဘောလုံးငယ် ၁၅လုံးပါဝင်သော model တခုကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါလော့စာရှုသူချစ်မိတ်ဆွေ။ ၁-၂-၄-၈ ဟူသော
အဆင့် ၄ဆင့်ကို ပုံဖော်ကြည့်ပါကုန်။
အဆိုပါmodel အား လေယာဉ်ပျံ တစ်စီး၏ ဖွဲ့စည်းပုံမျိုး ဆက်လက်ရှင်းလင်းအံ့။ pyramid ၏ ထိပ်ဆုံး ရှိ ဘောလုံးအား လေယာဉ်မှူး Pilot အဖြစ် လည်းကောင်း။ ဒုတိယတန်း ရှိ ဘောလုံး၂ လုံးမှာ မူ Co-Pilot ၂ဦး အဖြစ် လည်းကောင်း။ တတိယတန်းရှိ ဘောလုံး ၄လုံးမှာ လေယာဉ်မောင်မယ်များ Crew အဖြစ်လည်းကောင်း။
စတုတ္ထ(၀ါ) အောက်ဆုံးတန်းရှိ ဘောလုံး၈လုံးကိုမူ ခရီးသည် passengers အဖြစ်လည်းကောင်းမှတ်ယူပေးကြပါကုန်။ ခရီးသည် တစ်ဦးသည် အဆိုပါ ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရအောင် $1000 ပေးသွင်းရသည်ဆိုအံ့။ စုစုပေါင်း ခရီးသည် ၈ဦး $8000 ဖြစ်၏။ ထိုငွေသားကို Captain က ရယူလေသည်။ Theory အရ Captain အကုန်ယူသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြစ်ရာ လက်တွေ့ MLMများတွင်မူ Co-Pilots များနှင့် Crewသားများ ခွဲဝေယူကြသည် ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပေသည်။
သို့သော် သေချာသည်မှာတော့ အများစု ကို Captain ကယူ၏။ ထို့နောက် Captain သည်လေယာဉ်ကို စွန့်ခွာပေသည်။ (ဆက်လက် ငွေကြေးခံစားခွင့်မယူ တော့သည် ဟု ဆိုလိုသည်)။
ထိုအခါ pyramid ၏ ကျန်လူများ promotion ရ၏ ။ Co-pilots များသည် သီးခြား Captain ၂ဦးဖြစ်သွားပြီးPassengers များပင် Crew အဆင့်ရောက်၏။Pyramid လည်း ၂ခြမ်းဖြစ်သွားလေပြီး သီးခြား ခရီးသယ် အသစ် ၈ယောက်စီ ပါဝင်ခွင့်ရ၏။
ဤနည်းဖြင့် MLM သည် ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ကျက်တော့သတည်း။
၃. MLM ဘာကို ဘယ်လို ရောင်းသနည်း?
MLM ၏ အားသာချက်များ ကို ဦးစွာဖော်ပြအံ့။mainstream channels များ အသုံးမပြုသောကြောင့် ကြော်ငြာခ စရိတ် ၊ distribution စရိတ်၊Branding cost ၊ထို့ပြင် အရောင်း ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ရသော ၀န်ထမ်းငှားရသော အစရှိသည့် အထွေထွေ စားရိတ်များ လွန်စွာ သက်သာ၏။ သာမန်စီးပွားရေး အတွေးအမြင်နှင့်ပြောရလျင် ထိုသို့စရိတ်စက သက်သာသောကြောင့်ဈေးကွက်တွင်း အခြား နှိုင်းယှဉ်ပစ္စည်း (competitors' products) ထက်စာလျင် ချိုသာသောဈေးဖြင့် ဖြန့်ချိ ရောင်းချ နေသည် ဟု မြင်နိုင်ပေသည်။ သို့ရာတွင် လက်တွေ့ဝယ် ထိုသို့ မဟုတ်သည်ကို တွေ့ရှိရပေမည်။
MLM အများစုသည် pharmaceutical products ဟုဆိုအပ်သော ဆေးဝါးနှင့် အလှကုန်တို့၏ ကြားကျသော ပစ္စည်းများကို ရောင်းဝယ်သမှုပြုကြလေသည်။ ဈေးကွက်တွင်းရှိ သာမန်လူသုံးကုန် အလှကုန် တို့ထက် သာလွန် ကောင်းမွန်သော(သာလွန်ကောင်းမွန်သဖွယ်ရှိသော) ပစ္စည်းများ လည်းရောင်းတတ်ကြ၏။ Value-added လုပ်ထားသော ထုတ်ကုန်များဖြစ်ရာ သာမန်ပစ္စည်းတို့ နှင့်ယှဉ်ပါက ဈေးကြီး၏။ ဖြည့်ဆည်းထားသော Value ၏ တန်ဖိုးထက်ပင် Cost ကျသင့်မှု များစွာ ပိုမိုသော MLMများ ပင်ရှိသေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် pyramid စနစ်ကို အသက်ဆက်စေရန် လောင်စာ ဖြည့်ဆည်း ရသည့် သဘောနှယ် အဆိုပါလောင်စာကို စားသုံးသူထံမှ ကောက်ခံသည့် သဘောပေတည်း။
၄. MLM ဘာလဲ?
အထက်ပါ အတိုင်း ဆိုရသော် စားသုံးသူအတွက် အခြား ပစ္စည်းများထက် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ထုတ်ကုန်များကို ဖြန့်ချိရောင်းချပေးနေသော၊ (စားသုံးသူပင်လျင် ဖြန့်ချိသူဖြစ်ခွင့်ရှိသော) member များ အကျိုးများသော အဆိုပါ စနစ်သည် ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော Marketing Strategy တစ်ခုဟု စာရှုသူ ယူဆပါသလား? ဤမျှ ကောင်းမွန်နေလျင် အဘယ့်ကြောင့် အလုံးစုံသော ကုမ္ပဏီ ကြီးငယ်တို့သည် အနှီ စနစ်ကို မသုံးစွဲပါသနည်း ? ထို မေးခွန်းများ၏ အဖြေအတွက် ဤ စနစ်ကိုပင် အခြားသော model တခု သုံးကာ ဆွေးနွေး တင်ပြပါအံ့။ ခြေ ၆ချောင်း ရှိသော ပင့်ကူသဖွယ် မြင်ကြည့်ပေး စေလိုပါသည်။ ခေါင်း၁လုံး ၆ခု နှုန်းဖြင့် hierarchy အဆင့်ဆင့် ပွားလာသည် ဟု မြင်ကြည့်ပေးပါကုန်။ ၁-၆-၃၆-၂၁၆-၁၂၉၆ စသည့် member ဦးရေ နှုန်းဖြင့် level တဆင့်ချင်းစီ ခွဲထွက်သည်ဟု ဆိုပါချိမ့်။ Level 12 အရောက်တွင် member ဦးရေမှာ
2,176,782,336 ဦး ဖြစ်နေပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၃ပုံ၁ပုံ နီးနီး ဖြစ်နေရာ အဆိုပါ MLM မှ ကမ္ဘာမှာ လူ၃ဦးလျင် ၁ဦး member ဖြစ်ရမည် ဟု ဆိုလိုနေကြောင်းတွေ့နိုင်ပေသည်။Level 13 တွင် 13,060,694,016 ဖြင့် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ၂ဆနီးပါး ဖြစ်သွားပြီး ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာ မရှိသော model အဖြစ်ရောက်ရှိသွားပေသည်။
တဖန် မြန်မာပြည်အနေအထားဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြအံ့။ Level 10မှာပင် member ဦးရေ သန်း၆၀ ပြည့် သွားပြီ ဖြစ်ရာ တိုင်းပြည်ရှိ လူတိုင်း ဖြန့်ချိသူချည်းသာ ဖြစ်ကုန်တော့လေသည်(မည်သူ့ကိုရောင်းမည်နည်း?)။ Level 8 ကို တဖန် ပြန် ငဲ့ကြည့်ပါဦး ချစ်မိတ်ဆွေ။ Member ဦးရေ 1,679,616 ဖြစ်ပါသည်။ အကြမ်းဖျင်း လူ၁သန်းခွဲ member ဆိုပါစို့ Logic အရ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော အနေအထား ဖြစ်သော်လည်း probability အရ တွေးခေါ်ကြည့် ပါအံ့။
ဆင်းရဲသော ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည် အတွက်မူ အထက်မှာ ဆိုခဲ့သော ဈေးကြီးသည့် Value-added ပစ္စည်းများကို ကျန်လူဦးရေ ၅၈.၅သန်းက (လူဦးရေ စုစုပေါင်း သန်း ၆၀ ဆိုပါက)၀ယ်ယူ နိုင်ပါမည်လော? Target customer သည် မည်မျှ ရှိပါသလဲ။ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော လူတန်းစား အလွှာ ခွဲခြားမှု Pyramid ကိုကြည့်ပါလော့ မိတ်ဆွေ။
Buttom line ကို target မထားသော Business model ဖြစ်လို့ နေပေသည်။ အရပ်သုံးစကားနှင့်ပြောရလျင် လူတကာ ၀ယ်မသုံးနိုင်သော(၀ါ) လူ့မလိုင်လွှာသုံး ပစ္စည်းများသာ ရောင်းချသော လုပ်ငန်း မည်၏။ ထိုအခါ ဘာဖြစ်ပါသနည်း?
၅. MLM ဘယ်လဲ?
8 Balls Model အရ ဆိုပါလျင် လူဦးရေ အများစု ရှိနေသော အောက်ဆုံး Level များမှာ promotion ဖြစ်ခွင့်မရ (တစ်နည်း) Membership တွင် ကုန်ကျရင်းနှီး ထားသလောက် အကျိုးအမြတ် မရသည့်အခါ စွန့်ခွာကြတော့၏။
ဆက်လက် ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ လက်ရှိ အရှုံးပမာဏဖြင့်ပင် လက်စသတ်ကာ အခြားလုပ်ငန်းပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထိုအခါ အထက်မှ အဆင့်များမှလည်း Pilot မှ Co-pilotသို့ Crewမှ Passengerသို့ အဆင့်ဆင့် ရာထူးကျ demotion ကုန်တော့လည်။ ထိုအခါ ထွက်လေ-ကျလေ-ကျလေ-ထွက်လေနှင့် MLM စနစ်ပြိုလဲတော့ လေသတည်း။ စီးပွားရေးအရမူ ဤသည်ကို Domino Effect ဟုတင်စားလေသည်။ ဆင်လျက်ထောင်ထားသော ဒိုးဇက်ပြားများ တစ်ခုလဲသည်နှင့် အခြား တစ်ခုကို တိုက်ချ လှဲပစ်တတ်ခြင်းပေ။
Marketing အယူအဆ အရ တင်ပြဆွေးနွေးအံ့။ ဈေးကွက်တို့၏ သဘောသည် တချိန်တွင် saturate ဖြစ်တတ်သည်။ ဓါတုဗေဒသဘောအရ ပင်လျင် ပြည့်ဝပျော်ရည် saturated solution ထဲသည့် ထပ်မံ ဖျော်သွင်း လို့မရသည့် သဘော ကိုလည်းဆောင်ပေသည်။ လက်ရှိ ကျင်လည်နေသည့် Market ၏ Lifecycle ကို သရုတ်ခွဲ၍ မြင်တတ်ရန် လိုပေသည်။ ဤနေရာဝယ် မြင်သာအောင် Product ၃မျိုးခန့် သုံးကာ ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ပြုပါ။ လက်နှိပ်စက် ဟူသော product အမျိုးအစားရှိသော market သည် decline ဖြစ်နေသော market ဟု ဆိုလျင် ငြင်းမည်လား မိတ်ဆွေ။ ဒါဆိုလျင် Cell phone တွေကရော? ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် cell phone ပင်လျင် Mature market ဖြစ်၍နေပေသည်။ ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျနေသော(၀ါ) လူတိုင်း Cell Phone မကိုင်နိုင်သေးသော ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်တွင်သာ Growing Market ဟု ပြောနိုင်ပေသည်။ နောက်ဆုံးသော ဥပမာ ကတော့ Maturity ကိုရောက်နေသည့် Market အမျိုးအစား အဖြစ် ဆပ်ပြာ ဟု ညွှန်းချင်ပါသည်။ ဆပ်ပြာမတိုက်သောလူရိုင်းမျိုးနွယ်အသစ်များ ရိုးမတောင်တန်းများပေါ်မှ မပေါ်ထွန်းမချင်း လုံးဝ Growth လည်းမရှိ (ထို့ပြင်) ဆပ်ပြာ မတိုက်ဘဲနေလို့လည်း မဖြစ်။တခြားလည်းအစားထိုးသုံးစရာ မရှိသော Decline လည်းမရှိသော Market အမျိုး အစားဟုဆိုနိုင်၏ ။ တိုတိုနှင့် ရှင်းရှင်း ပြောရလျင် Market Life Cycle အရ Market သည် Mature Stage ရောက်သွားပါက ထို MLM ဇာတ်သိမ်းခန်း နီးလာပြီ ဟု ပြောချင်ပါသည်။
၇. စစ်တမ်းများက ပြောတဲ့ MLM
The Times ၏ အလို အရမူ Member ဦးရေ 33,000 အတွင်း လူ 90 သာ လုံလောက်သော ၀င်ငွေ ရရှိခဲ့သည်ဟုဆို၏။ 99.7% သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အရှုံးပြလေသည်။ Newsweek အလိုအရတော့ 1% ထက်နည်းသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသာ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းသည် ဟု ဖော်ပြပါရှိ၏။
၈. ကျွန်ုပ် သိသော MLM
အချို့ MLMများ အမှန်တကယ် Product ထုတ်ကုန် ရှိ၏။ အချို့မူ မရှိ။ အနှီ မရှိသည့် MLMများကို ထပ်မံ သရုပ်ခွဲပါက အတိုင်းအတာတခုထိ လုံလောက်သော အရင်းအနှီး ရရှိပြီးမှ ထုတ်ကုန် စထုတ်သော(၀ါ) လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်သော လုပ်ငန်းများနှင့် ဘာမှ မထုတ် မလုပ်ဘဲ Pilotsများ Co-Pilotsများ သာ အဆီစား၍ အသားမျိုနေသော လုပ်ငန်းအမည်ခံ များကလည်း မနည်း။ သည်လို လုပ်ငန်းတွေမှာ ၀င်ပါမိရင် ဘာဖြစ်တတ်သနည်း?
မိမိရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ငွေရင်းပြန်ရရန် (၀ါ) မိမိကိုယ်တိုင်အညာခံ ထိထားမှန်း သိလျက်နှင့် မိမိငွေရင်းပြန်ရရန်အတွက် မိမိက လူသစ်များအားလိုက်လံ လိမ်ညာရတော့သတည်း။ Member သစ်တိုးလျင် မည်၍မည်မျှ ပေးမည်။ ရောင်းအား ဘယ်လောက်ရှိလျင်ဘာခံစားခွင့်ရမည်။ Point systemများ အရ Point ဘယ်လောက်ဆိုလျင် ဘာအဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ဘာပေးမည်. ဘယ်ခေါ်သွားလည်ပတ်စေမည် စသော Loyalty schemes များ programmes များမှာ တင်းကြမ်း။ အမှန်အကန် လုပ်ငန်းများကိုမဝေဖန်လိုသော်လည်း Market Saturated ဖြစ်လာမည့် အနေအထားကိုတော့ သတိချပ်စေလိုသည်ဟု တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
အမြန်နည်းနှင့် သူဌေးဖြစ်လိုသူများ၊ အသိအမြင်ဗဟုသုတနည်းပါးပြီး နိုင်ငံခြား ဆိုတိုင်း မျက်စိမှိတ် အထင်ကြီးတတ်သူများ ၊တဖက်သားက ကျလောက်အောင် အပြောကောင်းပါက စိတ်လွယ်တတ်သူများ၊ တိုင်းတပါးဝယ် ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရကြရရှာသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ ပြည်တွင်းမှ အိမ်သူသက်ထားများ၊ ဘယ်သူဘယ်ဝါလည်း ပါတာပဲ ဟုတ်မှာပါလေ
ဟု ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ရှိတတ်သူများ MLM ၏မာယာများကို အထူး သတိချပ်စေလိုပါကြောင်း။ နိုင်ငံတကာတွင် ငွေကြေးခ၀ါချမှုများ အရှုပ်အထွေးများ ပြဿနာ များ အများဆုံး ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော MLM စနစ်၏ သရုပ်ကို တတ်စွမ်းသရွေ့ စာစီကုံးလိုက်ရပါတော့ သတည်း။
Credit - #နည်းစနစ်ကျကျအတွေးအခေါ်
Mlm စနစ်အကြောင်း / MLM ဆောင်းပါးများ